विशेष - रिपोर्ट , सुरक्षा
गृहमन्त्रीको ‘घातक’ कदम : सुपुर्दगी सन्धिबिनै कैदी बुझाउने बाटो खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार भन्छन्–‘सार्वभौम सत्तामाथि खतरा निम्त्याउने कुरा हो यो’
जनतापाटी डेस्क मंगलवार, पुष २९, २०७६, ०७:००:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतको गोवामा आयोजित ‘बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिमस्टेक)’ स्तरीय ‘आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागि हुँदा २०७३ असोज २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग दुई देशबीच कैदी हस्तान्तरणको प्रस्ताव राखे ।
प्रचण्डले सिरिसेनालाई श्रीलंकामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका चेतबहादुर थापाको सजाय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै दुई देशबीच कैदी हस्तान्तरणको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले ललितपुरका चेतबहादुरको सजाय फिर्ताका लागि भिटो प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरे । प्रचण्डले यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार नै कारबाही गर्न सकिने कुरा बताएका थिए, सिरिसेनासँग । तर, परराष्ट्रका अधिकारीले त्यतिबेलै प्रचण्डको प्रस्ताव ‘अपरिपक्व’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
कुरा त्यतिमै रोकिएन प्रचण्ड सम्मेलनबाट फर्किएपछि कैदी हस्तान्तरणको विषय जोडतोडले उठ्यो, नेपालमा । तर, उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो विषय त्यसै हरायो । तर, अहिले त्यही डिजाइनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुपुर्दगी सन्धिबिनै एक देशले अर्को देशसँग कैदी आदान–प्रदानको प्रावधान ल्याउने कसरत थालेका छन् । गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गृहमन्त्री थापाले कार्यदल गठन गरे, गएको भदौमा । त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रतिवेदन सहमतिका लागि परराष्ट्र पठाइएको छ ।
गृहले ‘कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’थप राय एवं परामर्शका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको बताए पनि परराष्ट्रका अधिकारीले आफुहरुलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा एक देशबाट अर्को देशमा गएर जेल परेका व्यक्तिलाई ‘सुपुर्दगी सन्धि’बिनै हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यदलका संयोजक सापकोटाले, ‘सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा दुई सार्वभौम मुलुकबीच समझदारी गरेर विभिन्न कसुर गरी अर्को देशमा पुर्पक्षमा रहेका वा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति आदानप्रदान गर्न सकिने भनेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो’ भनेका छन् । यस्तो प्रावधानले कैदी आदान–प्रदान गर्न अध्यागमन, कारागारलगायत कानूनमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आफुहरुले दिएको सापकोटाको भनाई छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेल भने यो विषयमा जानकार देखिएनन् । उनले भने, ‘हाम्रो कानूनमा के गर्ने के नगर्ने कुरा कानून शाखालाई थाहा हुन्छ । मलाई गृहले बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे पनि जानकारी छैन ।’ यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रतिवेदनमा सहमति जनाउनेमा शंका छ । यदि परराष्ट्र सहमत भए र त्यही अनुसार अध्यागमन कानून एवं कारागार कानून संशोधन भए नेपालमा भएका विदेशी कैदीबन्दी पारस्परिक सहमतिका आधारमा सम्बन्धित देशलाई बुझाउन बाटो खुल्ने अनुमान गरिएको छ ।
यहाँनेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कानून बने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली फर्काउन आग्रह जस्तो अनुनय गरिरहनु नपर्ने र विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता गराउन बाटो खोल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ । तर, पारस्परिक सहमतिका आधारमा कैदी आदान–प्रदान गर्ने प्रावधान लागू गर्ने सरकारको प्रयासलाई जानकारहरुले भने गलत भनेका छन् ।
संवैधानिक अध्येयता डा. भिमार्जुन आचार्यले सुपुर्दगी सन्धि नगरी कैदी आदान–प्रदान गर्ने राम्रो कप्सेप्ट होइन–भने । अन्तर्राष्ट्रिय कानून कति लागू हुन्छन् कति हुँदैनन् स्वभाविक हो, उनले भने, ‘तर, अहिले जुन पारस्परिक सहमतिका आधारमा कैदी आदान–प्रदान गर्ने भनियो । त्यसको पृष्ठभूमि भनेको राजनीतिक समझदारीका आधारमा पठाउने भन्ने हो । यसले भोलि ठूलो समस्या ल्याउँछ ।’ यसका लागि सुपुर्दगी सन्धि नै उपयुक्त हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने यो, खतरनाक कुरा हो–भने । उनले भने, ‘सन्धिमा प्रक्रिया तोकिएको हुन्छ । अपराधको पनि बर्गीकरण गरिएको हुन्छ, कस्तो अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी गर्ने भनेर । र, अर्कोतिर नेपालले तमाम मानव अधिकार सम्बन्धि सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनाले हामीले सुपुर्दगी गरेको कैदीलाई उसको मुलुकमा मृत्युदण्ड र यातना हुनसक्छ । उसको स्वतन्त्रता खोसिन सक्छ ।’
अर्कोतिर अदालतको स्वीकृतिबिना सुपुर्दगी गर्न मिल्दैन भन्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी । केही दिन अघि मुलुकको प्रणालीलाई नै गुमराहमा राखेर १२२ चिनियाँलाई चीनका सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाइयो, उनले अगाडि भने, ‘यस्तो गर्दै जाने हो भने भोलि तेस्रो देशका कैदीलाई पनि सुपुर्दगी गर्न दबाब आउला । अनि त्यो पनि गर्ने ? यो त सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण हो । यो अदालतमार्फत गर्ने कुरामा सरकारलाई अथोरिटी छैन ।’ अहिले नेपाली कारागारमा सबैभन्दा बढी कैदी भारतका छन् । भारतमा मृत्युदण्डको कानून छ, ती सबैलाई सुपुर्दगी गर्दा कयौँलाई मृत्युदण्ड हुनसक्छ । कुनै एक मुलुकलाई खुसी पार्न यस्तो गर्न लागिएको हो भने यो घातक हो, उनले भने, ‘हामी कुनै एक मुलुकतिर ढल्किनेवित्तिकै विदेश नीतिको सन्तुलन विग्रिन्छ । नेपालमा फरेन पोलीसी लुज हुनेवित्तिकै सत्ता नै परिवर्तन भएका इतिहास छन् ।’ यस्तो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानविरुद्ध हुन्छ । हाम्रो संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नहुने व्यवस्था छ । त्रिपाठीका अनुसार राजनीतिक मुद्दा एवं मानवअधिकारमा लागेका व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्न पाइँदैन ।
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले सुपुर्दगी सन्धि भयो भने प्रक्रिया सजिलै मिल्ने र सजिलो हुने बताए । उनका अनुसार खास सन्धि अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने र प्रक्रिया मिलाएर बुझाउने हो, तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘छिमेकी देशसँग राजनीतिक समझदारीका आधारमा व्यक्ति पक्राउ गरेर बुझाउने काम भइरहेको छ । त्यसो गर्न मिल्छ । जब तेस्रो मुलुकका कैदी सुपुर्दगी गर्ने कुरा आउँछ, त्यस्तो भने गर्नु हुँदैन नेपालले । नेपाल त्यसमा अहिलेसम्म अडिग पनि छ ।’
भारतसँगको सम्झौता आउटडेटेड
नेपालले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ । तर, त्यो असाध्यै पूरानो र नाकाम भइसकेको छ । छिमेकी चीनसँग कानूनी सहायतासम्बन्धि सन्धि गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । भारतसँगको सन्धि पुनरावलोकन नहुनुको कारण तेस्रो मुलुकका अपराधी पनि सुपुर्दगी गर्नु पर्छभन्ने भारतीय बखेडाले हो । नेपालले त्यसमा अहिलेसम्म चट्टानी अडान लिएको छ । भारतको मक्सदः पाकिस्तानी नागरिकलाई आफ्नो देशमा सुपुर्दगी गरोस् भन्ने थियो ।
गरैकानूनी काम नगरौँ–प्रसाईँ
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले अहिले गर्न खोजिएको कुराले शरणार्थीलाई ठूलो समस्या पर्ने बताए । उनले भने, ‘हामी रेफ्युजी कन्डिसन पाटीसँग सम्बन्धित छौँ । त्यसैले सुपुर्दगी सन्धि नभई हुँदैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा कैदी आदान–प्रदान गर्ने हो भने त्यो जस्तो गैरकानूनी (ईलीगल)काम केही पनि हुँदैन । त्यसो नगरौँ ।’
नेपालले अन्य मुलुकसँग अन्तर्देशीय सीमापार अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान (एमएलए) सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गरे पनि अपराधी तथा कैदी आदानप्रदान गर्ने कानून बनेको छैन ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गएको भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कैदी हस्तान्तरण सम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव सापकोटाको नेतृत्वमा कारागार विभागका महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको कार्यदल गठन गरेका हुन् । गृहले परराष्ट्रलाई यो प्रतिवेदन चार महिनाअघि नै पठाएको बताएको छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन । गृहमन्त्रीले केही दिन अघि चीन भ्रमण गर्दा छिमेकी मुलुक चीनले कैदी एवं अभियुक्त आदान–प्रदानको कुरा उठाएको बताइएको छ । र, सुपुर्दगी एवं यस्तै प्रकृतिका कानून अभावमा कतिपय अपराधी अनौपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
सुपुर्दगी कानून नभएका कारण नेपाल प्रहरीले विदेशबाट अनौपचारिक रूपमा नेपाली बन्दी वा अपराधी ल्याउने र नेपालबाट पनि त्यस्ता व्यक्ति अरूलाई बुझाउने गरेको छ । पछिल्लो पटक पुस ७ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई सरकारले डिपोर्टका नाममा चीन सरकारलाई ‘अघोषित सुपुर्दगी’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
मंसिर २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लागूऔषध कारोबार, विदेशी मुद्रा तस्करी, यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करीलगायत अपराधमा १ हजार २ सय ५५ विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । अहिले गृह मन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । परराष्ट्रका एक अधिकारीले प्रतिवेदन ‘अतिसंवेदनशील’ भएकाले हतारमा निर्णय लिन नहुने बताएका छन् ।
'राजनैतिकसंगै प्रशासनिक स्थिरता आवश्यक' आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुबाट सकेसम्म धेरै लगानी जुटाउनुपर्‍यो । अहिले लगानी सम्मेलन भयो राम्रै भयो । तर सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, लगानीकर्ताहरुसँग बसेर प्रस्ताव राख्दैमा लगानी आउने भन्ने होईन । यो त केवल प्रस्ताव मात्रै हुन् । यसको लागि त देशको अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । त्यसै लगानीको आश गरेर हुन्छ ? शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५, ०८:०४:००
तिहार विशेष : मटका देखी पटका सम्म, मखमली देखी जुवा सम्म ! सोमवार, कार्तिक ११, २०७६, ०७:०५:००
भीआईपीको दौरा–सुरुवाल किस्सा : लाजमर्नु भो गृहमन्त्रीलाई ! तर, दफा २५ (४) मा नेपालको तर्फबाट खेलकूदमा सहभागि हुने पदाधिकारी, खेल व्यवस्थापक, खेलाडी, प्रशिक्षक पुरुष भएमा सेतो रंगको दौरा–सुरुवाल, कालो टोपी, कालो जुत्ता र महिला भएमा साडी, ब्लाउज, निलो कोट र कालो जुत्ता लगाएर सहभागि हुनु पर्ने छ, भनियो । यसमा बाध्यकारी रुपमा व्यवस्थै गरिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छैन । बुधवार, मंसिर १८, २०७६, ०७:३८:००